Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyay weerarka hotelka Ambassador – Gedo Times
Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyay weerarka hotelka Ambassador
2nd June 2016 admin Wararka Maanta 0
(Villa Somalia) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka iyo dowladda aanay marna ka daali doonin dagaalka lagula jirao argagixisada.
Madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyay isagoo tacsi u diraya shacabka, qoysaska iyo eheladii ay ka baxeen mas’uuliyiin iyo xubno kale oo shacabka qiimo ku lahaa oo fiidnimadii caawa ku shahiiday weerar argagixiso oo lagu qaadey mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho.
“Innaa Lillahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo keygaba waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen Xildhiban Cabdullaahi Jaamac Kabaweyne iyo Xildhibaan Maxamuud Maxamed Guure. Waxan tacsi taa la mid ah u dirayaa qoysaskii ay ka baxeen dadkii shacabka ahaa ee iyaguna weerarkaasi waxashnimo ku shahiiday’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Ciidammada Qalabka Sida ay labadii maalmood ee la soo dhaafay ay dhirbaaxooyin kulul ku dhufteen argagixisada, iyagoo weliba ku guuleystey inay dilaan qaar ka mid ah horjoogeyaal caan ku ahaa dhibaateynta shacabka Soomaaliya iyo dalalka deriska.
“Waxaa weerarkani ay kooxaha naf la caariga ah la beegsanayaan shacabka aan waxba galabsan ay muujinayaan guuldarrooyinka isdaba-joogga ah ee ku habsadey. Waxaa nasiib wanaag ah in shacabka, dowladda iyo ciidammada amniga ay si wadajir ah isaga kaashanayaan dagaalka lagula jiro cadowga. Waxaana weeraradan waxashnimo ee argagixisada ujeeddada laga leeyahay ay tahay in gu cabsi geliyo shacabka si aanay u taageerin dowladnimada iyo nabadda, taasina waa wax aan dhici karin’’.
Madaxweynaha ayaa ammaan u jeediyay ciidanka dowladda sida degdegga ah ee ay uga jawaabeen weerarka argagixisada ay caawa ka fuliyeen caasimadda.
Wasiirka warfaafinta: Dowladda waa ay ka hortagtay weerarka argagixisada
Ra’isul wasaaraha Xukuumadda oo cambaareeyay weerarka hotelka Muqdisho ku yaalla